Ampitomboy ny fizakantenan'ny Mac misy anao amin'ny fampiharana MyAppNap | Avy amin'ny mac aho
Ampitomboy ny fizakantenan'ny Mac misy anao amin'ny fampiharana MyAppNap
Javier Porcar | | Fampiharana hafa ho an'ny Mac, Tutorials, maro
Ny fahaleovan-tenan'i Mac dia efa ela no nametrahana fanontaniana satria tombony ho an'ny maro izany. Androany, ny fanatsarana ny macOS dia mahatonga ny fanjifana loharanon-karena mihoatra ny antonony, eny fa na dia amin'ireo MacBook kely indrindra aza izay ahitsy ny fahaizan'ny bateria hatramin'ny farany ambony. Izay Mac androany dia manolotra fahaleovan-tena 8 ora eo ho eo, ary eo amin'ny 5 ora amin'ny solosaina efa antitra, ora ampy raha tsy mihetsika mandritra ny tontolo andro ianao.
Fa raha mila zavatra bebe kokoa ianao, MyAppNap Manome anao fahaleovan-tena bebe kokoa amin'ny Mac-nao.
Na ahoana na ahoana, io dia santionany amin'ny fampiharana, fa ilaina ny manara-maso azy fa misy bibikely. Izay ataony MyAppNap dia hampiato avy hatrany fampiharana iray raha tsy ampiasaina. Ny fampiharana dia mamakafaka ireo rindranasa izay ao aoriana, mba hanombanana raha tokony ajanona mijanona izy ireo. Ity hetsika ity dia natao ho an'ny tanjona tokana amin'ny famonjena ny fiainana bateria ao amin'ny Portable Mac.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fampiharana dia mody milaza fa ny fampiharana izay eo alohan'izay dia mandany fahefana fotsiny. Ary izy io dia rafitra rudimentary be ankehitriny: maka endrika script Python izy io, izay mila terminal ary misy safidy roa. Azontsika atao ny manondro rindranasa iray na maromaro izay tokony hataonao. Ohatra, raha te hampiato ny Twitterrific sy ny Tweetbot ianao:
Fa raha tianao ny hiasa amin'ny rindranasa rehetra amin'ny fotoana iray, afa-tsy ilay eo alohan'izay dia tsy maintsy ampiasainao:
Aorian'ny fampandehanana ny fiasa dia tokony hanondro ho azy ny zava-mitranga ny fikandrana terminal. Aorian'ny fitsapana dia tsy voadio tanteraka ny safidy maody mandeha ho azy ary tsy maintsy hialantsika ny fampiasana azy mandra-panavaozana vaovao.
Ary farany, manana ny kinova amin'ny rindrambaiko izay hita ao amin'ny menio fisotroana izahay. Indray mandeha alaina mila mametraka azy amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity ianao:
ary avy eo mampihetsika variant miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Ao amin'ity kinova ity, azonao atao ny mifehy ny rindranasa tianao hampiatoana, miditra mivantana amin'ny lisitra latsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ampitomboy ny fizakantenan'ny Mac misy anao amin'ny fampiharana MyAppNap
Ity no sary mihetsika HomePod vaovao notarihin'i, Spike Jonze
Ny doka voalohany momba ny iPhone X dia naminavina ny fandomanan'ny mpiasa ny varavarankely Apple Park